नेपाल आज | राजा आउँदैनन् , हिन्दु राष्ट्र कांग्रेसले नै घोषणा गर्छ (भिडियोसहित)
राजा आउँदैनन् , हिन्दु राष्ट्र कांग्रेसले नै घोषणा गर्छ (भिडियोसहित)
नेपाली कांग्रेसका तात्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बामपन्थी सरकार भएक ाबेला दिएको अभिव्यक्ति राजनीतिक वृतमा निकै चर्चित थियो, ‘यो सरकारलाई फू गरेर ढाल्दिन्छु । ’
कोइरालाको अर्को पनि चर्चित अभिव्यक्ति थियो, ‘यो सरकार पाकेको आँप हो, झार्नू पर्दैन, आफै झर्छ । ’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद देवेन्द्रराज कँडेल अहिले उनी कोइरालाको भनाइ वर्तमान सरकारमा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनको भनाइ थोरै फरक छ । कोइरालाले फू गरेर ढाल्दिन्छु भनेका थिए, तर कँडेल भने सरकार ढाल्न फू गर्न पनि जरुरी नभएको बताउँछन् ।
कँडेल भन्छन्, ‘यो सरकार ढाल्न फू गर्नै पर्दैन, आफै ढल्छ । हेर्दै जानुस कुनै पनि दिन कुनै पनि समय यो सरकार आफ्नै कारण ढल्छ, हामीले केही गर्नै पर्दैन । सरकार दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । मुलुकमा बलात्कार, हत्या, असुरक्षाका घटना बढेका छन् । सरकार अपराधीलाई संरक्षण गर्ने निकाय बनेको छ । जनताका समस्या समाधानमा ध्यान छैन । सर्वसाधारणलाई बाँच्नै मुस्किल भैसक्यो । यी सबै कारणले सरकार हल्लिसकेको छ, अब ढल्न मात्र बाँकी छ ।’
नागरिकता विधेयक र राष्ट्रिय परिचय पत्र
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अलोकप्रिय कदम चालिरहेको बताउँदै कँडेल भन्छन्, ‘नागरिकता विधेयक अड्काएर राखिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयक छलफलका क्रममा छ, गृहमन्त्रीले देशभर नागरिकता वितरण गर्न सर्कुलर जारी गर्छन्, यो कुन तरिका हो ?
राष्ट्रिय परिचय पत्रका विषयमा पनि यस्तै छ । यो विषयमा पनि समितिमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ, तर गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसहित अधिकांशलाई वितरण गरिसके । सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले हिंड्ने हो भने यी समिति किन राख्नु पर्यो ? कि खारेज गर्नुपर्यो कि समितिको निर्देशन अनुसार चल्नु पर्यो ? गृहमन्त्रीले संसदीय समितिकै धज्जी उडाइरहेका छन् ।
निर्मला पन्त घटनाको वास्तविकता
पोखरामा भएको चर्चित नमिता सुनिता काण्डको उदाहरण दिंदै पूर्व गृह राज्यमन्त्रीसमेत रहेका कँडेलले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारालाई सरकारले सम्पूर्ण तागत लगाएर जोगाएको आरोप लगाए ।
सो घटनामा सुरक्षा निकायका अधिकारी नै संलग्न भएकोतर्फ इशारा गर्दै उनले सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म कांग्रेसले यो विषयलाई आफनो एजेण्डा बनाइरहने चेतावनी दिए । उनले यो घटनाका प्रमाण प्रहरीले नै मेटाएको दावी गर्दै बम दिदी बहिनीको घरबाट अनुसन्धान किन नभएको भनी प्रश्न गरे ।
हिन्दु धर्म र राजसंस्था
विगतमा षडयन्त्र र छलछामको राजनीतिबाट मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको भएपनि अब त्यो सच्याउने समय आएको छ । नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिने स्थिति तयार भैसकेको छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको अन्तरिम संरचना बनाउने गृहकार्यमा रहेको र संघीयताको मोडल अनुसार पार्टी व्यवस्थापन भैसकेपछि हिन्दु राष्ट्र, संघीयता, आरक्षण लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गरी दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने छ । कांग्रेसले मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने कुरामा म ढुक्क छु ।
हिन्दु धर्म र राजसंस्थालाई जोडेर हेर्नु हुँदैन । राजसंस्था इतिहास भैसक्यो । राजसंस्था फर्काउने विषय व्यवहारिक छैन र यो जरुरी पनि होइन ।
विदेश भ्रमणको रहस्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र कांग्रेस महामन्त्री डा. सशांक कोइराला सबैको विदेश भ्रमणलाई राजनीतिक परिवर्तनको संकेतका रुपमा पनि बुझन सकिन्छ ।
हुन त यी भ्रमण सरल र सामान्य हुन तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि नभएकाले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि औपचारिक÷अनौपचारिक खेल भैरहेको हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, जसले जहाँ जे गरेपनि मुलुक परिवर्तन विदेशीको इशारामा होइन, नेपाली जनताको चाहना अनुसार गर्नुपर्छ ।
१४औं महाधिवेशन सहमतिको
नेपाली कांग्रेसमा सबै पक्षबीच विवादका विषय साँघुरिदै गएकाले १४औं महाधिवेशन सहमतिको महाधिवेशन हुनसक्ने सम्भावना छ । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकबाट सहमतिका आधारमा विवाद सल्टाउने परम्पराको सुरुवात भएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पनि बहुमतको आडमा पेलेर जाउँ भन्ने मनस्थितिमा छैनन् । सबैलाई मिलाएर लैजाने उनको सोच देखिन्छ । यो कुरा उनको निर्णयबाट प्रमाणित हुँदै आएको छ ।
अब देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन अन्य विभिन्न खेमाका नेताहरु पनि एकताका लागि तयार हुनुपर्छ । १४औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाएर सुखद सन्देश प्रवाह किन नगर्ने ?